ဥပမာ - ကလေး ၊ ခုံရုံး၊ တရား စသည်ဖြင့်...
- Any -ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုရှယ်လစ်သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံတော်တော်လှန်ရေးကောင်စီပါလီမန်
- Any -နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီရုံးပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာနနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဝန်ကြီးဌာနသမ္မတရုံး ဝန်ကြီးဌာနနယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနစီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဝန်ကြီးဌာနဥပဒေရေးရာဝန်ကြီးဌာနပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီးဌာနသာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနစိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာနပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနသယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာနလျှပ်စစ်နှင့် စွမ်းအင် ဝန်ကြီးဌာနလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်းအား ဝန်ကြီးဌာနအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနစီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနပညာရေး ဝန်ကြီးဌာနကျန်းမာရေးနှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနလူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်နေပြည်တော် ကောင်စီအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
- Any -ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။
- Any -ပါလီမန်တော်လှန်ရေးကောင်စီပြည်သူ့လွှတ်တော် (မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ)နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီနိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
တိုင်းဒေသကြီး / ပြည်နယ်
- Any -ကချင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးစစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
၂၀၁၉- ၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းဥပဒေ
မြေသိမ်းဆည်းခြင်း၊ ပြန်လည်နေရာချထားခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
Copyright © 2015. Information Matrix. All rights reserved.